Madaxweyne Gaas: Sharciyada uu Baarlamaanku Ansixinayo waa in Wadatashi laga yeesho | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Gaas: Sharciyada uu Baarlamaanku Ansixinayo waa in Wadatashi laga yeesho
MUQDISHO – Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali(Gaas) oo ka hadlaayey shirkii Wadatashiga Madaxda Dowladda Federaalka iyo Maamul goboleedyada ayaa sheegay in loo baahan yahay in dalku helo xasilooni siyaasadeed.
Madaxweyne Gaas ayaa ka dhawaajiyey in dowladihii hore ay hareeyeen khilaaf aan la ogeyn waxa uu ku dhisan yahay ,wuxuuna soo jeediyey in wadajirka uu halkan ka bilowdo isla markaana cadawga meel looga soo wada jeesto.
Wuxuu sheegay in arrimaha masiiriga ah si sax ah looga wada hadlo,isla markaana dhanka xasillinta dalka kaliya laga shaqeyn oo la sii wado howlaha maamul u sameynta,dowlad wanaaga,Federaaleynta iyadoo ay bar bar socoto xoreynta dalka.
Madaxweynuhu wuxuu soo jeediyey in shuruucda dalka lagu dhaqi lahaa laga wadahadalo balse aan loo baahneyn in sharciyada qaar lala ordo oo Baarlamaanka ansixiyo iyadoo aanan wadatashi laga yeelan.
Sharci hebel ayaa baarlamaanka ansixinayaa oo aan waxba laga ogeyn, oo wax lagala cararayo aan muuqan, waxaa loo baahan yahay sharciyada la ansixinaya in marka hore wadatashi laga yeesho, wax walbana si waadix looga shaqeeyo, markaas ayay kalsooni ka dhex abuuri kartaa bulshada dhexdeeda”ayuu yiri C/wali Gaas.